Ungayikhipha kanjani i-botanicals ultrasonically - i-Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Ungayikhipha kanjani i-botanicals ultrasonically"
Ama-botanicals elinye igama lezitshalo. Ama-botanicals acebile ngamakhompiyutha e-bioactive (okuthiwa ama-phytochemicals), asetshenziswa isib ukukhiqiza izithasiselo zokudla ezikhuthaza impilo, ukudla neziphuzo zokuphuza, imithi, noma izithako ezisebenzayo emikhiqizweni yezimonyo. Izithako ze-botanical zingakhiqizwa kusuka ezingxenyeni ezahlukahlukene zezitshalo, isib. Amakhambi, izimpande, izimbali, izithelo, amaqabunga, imbewu, noma amagxolo.
Ukuze uhlukanise isithako esisebenzayo esitshalweni, kudingeka indlela yokukhipha. Amakhompiyutha we-bioactive afana namavithamini, amaminerali, ama-polyphenols, ama-flavonoid, ama-terpenes njll angakhishwa ngamasu ahlukahlukene wokukhishwa njengokungenisa, i-steam distillation, i-maceration noma i-solvent ekhishwe. Lezi zinqubo zokukhishwa zivame ukuchitha isikhathi, zingasebenzi kahle noma zibandakanya amakhemikhali anobuthi.
I-ultrasonication esebenza ngokuphezulu inqubo eqinisa inqubo, esheshisa ukukhishwa kwama-phytochemicals, ikhuphula isithako sokukhishwa futhi ivumela kaningi ukusetshenziswa kwama-soltiver angenawo ubuthi (isib. Amanzi, i-ethanol, i-glycerine, uwoyela wemifino njll.). Njengendlela engeyona eyokushisa, ukukhishwa kwe-ultrasonic kuvimbela ukonakaliswa okushisa okwenziwa yizithako ezibuthisisa amazinga okushisa futhi kuholele kokukhipha okunekhwalithi ephezulu.
Funda kabanzi mayelana nokukhipha i-ultrasonic nezinzuzo zako!